शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा २५६ स्लाईसको अत्याधुनिक सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन
जनस्वास्थ्य सरोकार, भक्तपुर । भक्तपुरको दूधपाटीस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अत्याधुनिक २५६ स्लाईस सिटी स्क्यान सेवा शुरु भएको छ । मिर्गौला र नसामा भएको समस्या पहिचानका लागि यो सिटी निकै भरपर्दो मानिएको छ । उप—प्रधान एवं
मुलुकमा जोर्नी प्रत्यारोपण केन्द्र किन चाहिन्छ ?
डा. दीर्घराज आरसी सिभिल सर्भिस हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले ७ वर्षको अवधिमा करिब ४ सय १५ जनाजतिको हिप तथा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिसक्नुभएको छ । चुनौति देशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा जोर्नी
विगत २० वर्षदेखि हाडजोर्नी उपचार सेवामा समर्पित नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल अति विपन्न र गरिब बिरामीहरुको पहुँच, आशा र भरोसाको रुपमा परिचित छ । यो च्यारिटेवल हस्पिटल हो । पैसा नभएपनि उपचारबाट कोही पनि बञ्चित हुनुपर्दैन । बिरामीको